September 2021 – Shwe Yaung Lan
September 30, 2021 K K 0
အခြားဂြိုလ်တွေသာ လနဲ့အကွာအဝေးတူတူသာဖြစ်ခဲ့ရင် ကျနော်တို့ နေထိုင်တဲ့စကြာဝဠာကြီးက ကျနော်တို့နေထိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီးအပါအဝင် ဂြိုလ်(8) လုံးနဲ့ဖွ့ဲစည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။မတူတာတစ်ခုက အကွာအဝေးနဲ့အရွယ်အစားပါ။ဒါကြောင့် ပိုကြီးတဲ့ဂြိုလ်ဖြစ်ပေမယ့် အကွာအဝေးပိုများတာကြောင့် ပိုသေးတယ်ထင်ရတတ်ပါတယ်။လနဲ့ကမ္ဘာဟာ 384,000 km ကွာဝေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ ြဂ်ုလ်တွေအားလုံးသာ လနဲ့ကမ္ဘာရဲ့အကွာအဝေးလောက်သာရှိခဲ့ရင် ဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုတာ ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (1)Venus ကမ္ဘာနဲ့အကွာအဝေး- 133,240,000 km (2)Mercury ကမ္ဘာနဲ့အကွာအဝေး-106,150,000 km (3)Mars ကမ္ဘာနဲ့အကွာအဝေး-395,630,000 km (4)Jupiter ကမ္ဘာနဲ့အကွာအဝေး-636,840,000 km (5)Saturn ကမ္ဘာနဲ့အကွာအဝေး-1,405,000,000 km […]
စီးပွားရေး တစ်ခုခု စပြီးလုပ်မယ် ဆိုရင် သိထားသင့်တဲ့ အရာ(၆)မျိုး
September 30, 2021 SYL 0
ပိုက်ဆံ ရှာနည်း နှင့် ပိုက်ဆံ အကြောင်း…. ၁။ ပိုက်ဆံ ရှာရာတွင်…. ဘယ်တော့မှ ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းပေါ်မှာ မရပ်တည်ပါနဲ့။ တခြားသော ဒုတိယဝင်ငွေ ဝင်နိုင်အောင် ရင်းနှီးထားပါ။ လူတစ်ယောက်က ဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကို ခြေစုံပစ်ရပ်တည်နေရင် အဲ့ဒီဝင်ငွေ ရပ်တန့်သွားတဲ့နေ့ ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ဖြစ်ရတက်ပါတယ်။ ဘဝမှာလည်း အားလုံး ဗြောင်းဆန်သွားတက်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒုတိယ ဝင်ငွေ ရနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကို အမြဲရှာထားပါ။ ၂။ ပိုက်ဆံ သုံးရာတွင်…. သင့်မှာ […]
မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက် အကြီးကြီးလွဲခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ အဖြစ်များ
မျှော်လင့်ချက်တွေ အကြီးကြီးထားတာဟာ တကယ်တော့မကောင်းဘူးနော်။အဆိုးဆုံးက online က ပစ္စည်းဝယ်တဲ့အခါမှာပဲ။သူတို့ပြထားသလို ရောက်လာမယ်မှတ်လို့ ဝယ်ပြီးမှ မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်မကိုက်ဖြစ်နေတာမျိုးဆို အဆင်မပြေပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့ မျှော်လင့်သလိုမဖြစ်လာတဲ့ အရာတွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (၁)ကိုယ်ဝတ်လိုက်မှပဲ မလှတာလား မသိပါဘူး (၂)ခွေးစာတွေမှာရင် အရွယ်အစားကို သေချာကြည့်ရွေးပါရန် (၃)ပုံထဲကနဲ့သိပ်တော့ မတူပေမယ့်..ကလေးလေးကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ ထားလိုက်ပါတော့ (၄)ဒါလေးမြင်ရဖို့ မိုင် ၂၈၀၀ ကျော်ခရီးနှင်လာတာလေဪ (၅)မှာတာက ကျောက် ရောက်ချလာတာက သံတုံး မဆိုးပါဘူး (၆)ကြိုးစားကြည့်လိုက်တာပဲလေ (၇)သူလုပ်သလို လိုက်လုပ်တာပဲလေ […]
ပိုက်ဆံချေးပြီး ပြန်မဆပ်ဘဲ နေရင် ဒီစာဖတ်ပြီးမှ ရဲရဲသာတောင်းပါ
ပိုက်ဆံချေးထားပြီး ပြန်မဆပ်ပဲ တိုင်ချင်ရာတိုင်ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့ရင် ဒီစာဖတ်ပြီး ရဲရဲသာတောင်းလိုက်ပါ…… မင်္ဂလာပါ စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ပိုက်ဆံချေးထားပြီး ဆပ်မယ့်သူကပြန်မဆပ်ပဲ တိုင်ချင်တဲ့နေရာ တိုင်ဆိုပြီးပြောလာရင် ဒီစာဖတ်ပြီး ရဲရဲသာတောင်းလိုက်ပါ။ ခင်မင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် တခြားသောအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုက်ဆံချေးထားမိတဲ့သူများအတွက် ၊ သိထားသင့်တာလေးတွေ ကိုယ်ချင်းစာလို့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံချေးထားမိလို့ ဆပ်မယ့်သူက မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်လို့ပြောလာရင် ဒီစာကိုဖတ်ပြီး ရဲရဲတောင်းလို့ရပါပြီ၊ မဆပ်နိုင်ဘူး ကြိုက်တဲ့နေရာတိုင်ခင်ဗျားတို့ငွေတိုးချေးစားထားတာ ကျုပ်တို့တိုင်လိုက်ရင် ထောင်ထဲ ၅ နှစ်ရောက်သွားမယ်။ စသည်ဖြင့် ဒီလိုစကားတွေ […]
ဖုန်းအဟောင်းတွေကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချဖို့ နည်းလမ်း(၅)သွယ်
ကိုယ့်အိမ်မှာ မော်ဒယ်နိမ့် သွားလို့ မသုံးချင်ဘဲ ပစ်ထားတဲ့ ဖုန်းတွေရှိရင် ဒီနည်းတွေနဲ့ အသုံးချလို့ရပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးဟာ သုံးလို့ ရနေသ‌ရွေ့ ကိုယ့်အတွက် အတော်ကြီး အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ မသုံးဖြစ်လို့ ချောင်ထိုးထားတဲ့ ဖုန်းဟောင်းတွေကို အခုလို နေရာတွေမှာ အကျိုးရှိရှိ ပြန်သုံးလို့ ရပါတယ်။ (၁) နှိုးစက် / MP3 Player…. ဖုန်းဟောင်းတစ်လုံးဟာ ဂိမ်းကစားဖို့အတွက် RAM မနိုင်တော့ရင်တောင် သင့်အိပ်ရာဘေးမှာ နှိုးစက်အဖြစ် […]
အချိန်တိုအတွင်း တိုးပွားလာအောင် သိထားသင့်တဲ့ ငွေစုနည်းဗျုဟာ ၆ ချက်
ပိုက်ဆံစုနည်း ဗျူဟာ (၆)ချက်…. ပိုက်ဆံစုတယ်ဆိုတာ ရည်မှန်းချက်တစ်ခုထားပြီး ရေရှည်တည်ဆောက်ထားသင့်တဲ့ အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ငွေကြေးအောင်မြင်မှုမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ဝင်တယ်ဆိုတာထက် ဘယ်လောက်စုနိုင်တယ်ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ လူတွေက မဝင်သေးတဲ့ပိုက်ဆံကို မျှော်ကိုးပြီး အကြွေးယူတတ်ကြတယ်။ ဒါက အဓိက မှားယွင်းနေတဲ့အချက်ပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေ ပိုက်ဆံစုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်လိုဗျူဟာတွေ သုံးရမလဲဆိုတာ အချက်ကျကျတင်ပြချင်ပါတယ်။ ၁။ သုံးပြီးမှ မစုလေနဲ့…. လစာထုတ်တာနဲ့ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ပြီးမှ ပိုက်ဆံစုတတ်ကြတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ လစဉ်စုဆောင်းမယ့် ပိုက်ဆံပမာဏကို သတ်မှတ်စုဆောင်းပြီးမှသာလိုအပ်တဲ့အရာတွေကို ဝယ်သင့်ပါတယ်။ […]
အာလူးပြုတ်ကြောင့် မယုံနိုင်အောင် အသားဖြူစေတဲ့ နည်းလမ်း
ရက်ရက်စက်စက် သိသိသာသာကို အသားဖြူ မြန်စေတဲ့ အာလူးပြုတ် အစွမ်း….. ထူးထူးဆန်းဆန်း မျက်နှာ ကို သိသိသာသာဖြူစေတဲ့ အာလူးပြုတ် အစွမ်း ဒီတစ်ခါတော့ ဈေးကြီး နာမည်ကြီး တဲ့ အလှကုန် တွေ သုံးစရာမလိုဘဲ မျက်နှာအသားအရေ ကို သိသိသာသာ ဖြူဝင်းစေနိုင်မယ့်၊ မှော်ဆန်ဆန် အာလူးပြုတ် နည်းလမ်းအကြောင်းမျှ ဝေပေးပါရစေနော် … … ။ ဒီ နည်းလမ်း လေးဟာ သင့် မျက်နှာ […]
အချိုရည်ဘူးတွေ ခဏခဏ သောက်လေ့ရှိသူများ သတိပြုပါ
အလုပ်တွေကိုအာရုံစူးစိုက်ပြီးလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ အိပ်ချင်စိတ်ပျောက်ပြီး ခေါင်းကြည်ဖို့အတွက်၊ အားဖြည့်အချိုရည်တွေကို တရားလွန်သောက်သုံးတက်ကြသူများအတွက် အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ Austin လို့နာမည်ရတဲ့အမျိုးသားဟာ အလုပ်ကိုကြာရှည်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့အတွက် အားဖြည့်အချိုရည်တွေကိုမကြာခဏသောက်ရာကနေ ၊ တရားလွန်သောက်သုံးလာခဲ့ပြီး အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့နေလာရင်း Austin တစ်ယောက် ဦးနှောက်သွေးယိုစီးမှုဖြစ်လာခဲ့ပြီး ၅နာရီကြာခွဲစိတ်မှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက်မှာလည်း သတိမေ့နေသေးတဲ့အတွက် စက်တွေ ပြွန်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကုသခဲ့ရပါတယ်။ Austin ရဲ့မိဘ၂ပါးနဲ့ ဇနီးသည် Brianna တို့မှာ လူရုပ်တောင်မပေါ်တဲ့အထိ စက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ကုသထားရတဲ့ Austin ကိုမြင်ကာ ရင်ကွဲပက်လတ်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ […]
စားနေကြပေမယ့် လူသိနည်းတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများ….. ကြက်ဟင်းခါးသီး၏ စွမ်းပကား ခါးသက်သက် အရသာရှိတဲ့ကြက်ဟင်းခါးသီးဟာ အပူပိုင်း စိုစွတ်တဲ့ရာသီမှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး ၊ အဓိကအားဖြင့် အာရှတိုင်းပြည်တွေနဲ့ တောင်အမေရိကတွေ မှာ တွေ့ရပါတယ်။ အရသာက ခါးသက်တယ်ဆိုပေမယ့် ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများစွာ ရှိပါတယ်။ အာဟာရတန်ဖိုး… ကြက်ဟင်းခါးသီးမှာ ကယ်လိုရီပါ ဝင်မှု အလွန်လျော့နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ အများ အပြား ပါဝင်ပါတယ်။ […]
စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ အခါတိုင်း ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
“စိတ်ဓါတ်ကျခဲ့ရင် မရပ်တန့်လိုက်ပါနဲ့… ၃ စင်တီမီတာကို သတိရပါ” ဝါးပင်တစ်ပင်က ၃ စင်တီမီတာ ကြီးဖို့ ၄ နှစ် အချိန်ပေးရပါတယ်။ အဲ့ဒီ ၄ နှစ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဝါးပင်တစ်ပင်ဟာ ၁ ရက်ကို ၃၀ စင်တီမီတာ အထိ ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ ၆ ပတ်အတွင်း ၁၅ မီတာ လောက် အမြင့်ကို ရောက်နိုင်တယ်။ ဒါဟာ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပထမဆုံး ၄ နှစ် […]